Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Tallaalkii ugu horreeyay ee COVID-19 DNA-da adduunka ayaa lagu ansixiyay Hindiya
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Hindiya • News • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Tallaalka, ZyCoV-D, wuxuu adeegsadaa qayb ka mid ah walxaha hidde-sidaha ee fayraska kaas oo bixiya tilmaamo sida DNA ama RNA midkood si loo sameeyo borotiinka gaarka ah ee nidaamka difaaca uu aqoonsado kana jawaabo.
Hindiya ayaa oggolaatay tallaal cusub oo coronavirus ah.
Oggolaanshaha ayaa loo oggolaaday isticmaalka dadka waaweyn iyo carruurta 12 iyo kuwa waaweyn.
Hindiya waxay higsanaysaa inay tallaasho dhammaan dadka waaweyn ee u -qalma marka la gaaro Diseembar, 2021.
Tallaalkii ugu horreeyay ee DNA-ga adduunka ee ka dhanka ah fayraska COVID-19 ayaa oggolaansho adeegsi deg-deg ah uu siiyay Ururka Xakamaynta Daroogada ee Dawladaha Dhexe ee Dowladda Hindiya (CDSCO), iyadoo waddanku weli la halgamayo sidii loo xakameyn lahaa fayraska ku faafay gobollada qaarkood.
The CDSCO oggolaanshaha waxaa loo oggolaaday isticmaalka degdegga ah ee dadka waaweyn iyo carruurta 12 iyo ka weyn.
Oggolaanshuhu wuxuu siin doonaa tallaalka ugu horreeya kuwa ka hooseeya 18 sano, wuxuuna siin doonaa dhiirrigelin HindiyaBarnaamijka tallaalka, kaas oo ujeedadiisu tahay in la tallaalo dhammaan dadka qaangaarka ah ee Hindida ah ee u qalma marka la gaaro Diseembar, 2021.
Si ka duwan inta badan tallaalada coronavirus, oo u baahan laba qiyaasood ama xitaa hal mar, ZyCoV-D waxaa lagu maamulaa saddex qiyaasood.
Soo-saaraha dawada guud, oo ku taxan Cadila Healthcare Ltd, wuxuu higsanayaa inuu sameeyo 100 milyan ilaa 120 milyan oo ah qiyaasta ZyCoV-D sanadkiiba wuxuuna durba bilaabay kaydinta tallaalka.
Tallaalka Zydus Cadila, oo ay iska kaashadeen Waaxda Biyotechnoolajiyadda, ayaa ah tallaalka labaad ee guriga lagu beero si uu oggolaansho degdeg ah uga helo Hindiya ka dib Bvarat Biotech's Covaxin.
Soo-saaraha daroogada ayaa sheegay in bishii Luulyo tallaalkeeda COVID-19 uu wax ku ool u ahaa mutantarka coronavirus-ka cusub, gaar ahaan Delta kala duwanaanshaha, iyo in tallaalka lagu maamulo iyada oo la adeegsanayo codsi-bilaa irbad ka soo horjeeda cirbadaha dhaqameed.
Shirkaddu waxay codsatay oggolaanshaha ZyCoV-D bishii Luulyo 1, iyada oo ku saleysan heerka wax-ku-oolnimada ee 66.6 boqolkiiba tijaabadii dambe ee in ka badan 28,000 mutadawiciin ah oo dalka oo dhan ah.
Pandaw Cruises hadda wuu u xidhan yahay ganacsi wanaag sababtoo ah...
Kooxda Bloomwell waxay heshaa maalgelinta abuurka ugu badan abid ...
Yanina Gavrilova waa geesigii ugu horeeyay ee dalxiiska Yukreeniyaan